မင်းတို့မေမေလေး နှာစေးယုံတင်မက မျက်လုံးပါ ဝါးတားတားဖြစ်နေ သလိုပေါ့လေ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဘာသာ၊သာသနာဆိုတာ ယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တာပါ။ ရုပ်ပွါးတော်၊ စေတီ၊ ပုထိုးတွေကို ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဝင်တွေအတွက် အဲဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေက မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
မဘသ အဖွဲ့ရဲ့ သာသနာတော် နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘက်မလိုက်ပဲ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမကြည့်ပဲ အရေးယူဆောင်ရွက်တာကို ဘုရားကျွန်တော်မျိုး အထူးတလည်ထောက်ခံအားပေးပါတယ် ဆရာတော်ဘုရားတို့ … »
မင်းတို့မေမေလေး နှာစေးယုံတင်မက မျက်လုံးပါ ဝါးတားတားဖြစ်နေ သလိုပေါ့လေ
ဝါဇီ လှမြင့် ဝါဇီ လှမြင့်
”””ဒကာ လေးDameio Ekoto
ဒီနိင်ငံ မှာ မ ဟ န ဖြစ်ဘို့ဘယ်လောက် ရင်းရတယ် (ဘယ်နနှစ် လို့မိန့်တာနော်) ဆိုတာ ဒကာ လေး မသိပါဘူးလေ၊ ကိုယ်တို့ ၄၇ ယောက် အဲ့ အဲ့ ၄၇ ပါး လည်း ကိုယ်ပိုင်ကား ကိုယ်စီ၊ သိန်းထောင်ကျော်တန် မြေကွက်တွေနဲ့ အခြေ ခိုင်နေတာ နေတတ် ပြောတတ် ဟောတတ် လို့ပေါ့( စစ်အစိုး ရ ချည့်ဟောနေရတာ မင်းတို့ဘဲပြောတာလေ သူတို့တအားဆိုးတယ် ဆိုလို့ ခွီးးး)
တခါတလေ (ခဏ ခဏ)နှာစေးပေးရတယ် ဒကာ ၊
(ခု တောင် မင်းတို့မေမေလေး နှာစေးယုံတင်မက မျက်လုံးပါ ဝါးတားတားဖြစ်နေ သလိုပေါ့လေ)
မီးဆွမ်း ကိစ္စ ဖြစ်တုန်းကတောင် ငါတို့မမြင်မိကြဘူး (ဘုရားစူး တကယ်မမြင်တာပါ) ခု ဗလီ အဖျက်ခံရတဲ့ကိစ္စ ကောလဟာလ နေမှာပါ ဒကာ
၂၀၁၅ မှာ မ ဘ သ ကိုယ်တော်တပါး ပါး ‪#‎သမတ‬ /‪#‎ဝန်ကြီး‬/‪#‎ကာချုပ်‬/‪#‎ရဲချုပ်‬ တခု ခု မဖြစ်ဘူး လို့မင်းတာဝန်ယူရဲ လို့လား ဒကာ၊
ခု တောင် မ ဘ သ မျက်စောင်း အကြောင်း ၃ ပါးမရွေးဘူးလေ ဒကာ(ရဲမြင့် ရဲ့ မန္တလေးကိစ္စ ကိုင်သွားတာတွေ့လား အလောင်းမြို့ပတ်ပြီး ဂျွန်းဗလီမှာ ဂိတ်ဆုံးတာလေ)အဲ့တုန်းက ယာယီရဲချုပ်က ရေစည်ဆြာတော် လေ ကွ! ! !(မတော် ငါတို့ကမ္ဘာအေး လာဂိတ်ဆုံးနေ မှ)
ဒါကြောင့် စာ များများဖတ်ပါ ဒကာ
အဆိပ်ဖြစ်မဲ့စာတွေ မဖတ်ပါနဲ့(ကိုယ်တော်တို့တောင် ၅၀ ဖြစ်မဲ့စာတွေဖတ်တာ ခု အေးဆေး အေးဆေး)
## ( နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ နီပါးသက်တန်းရှိ ကန်ကြီးဗလီဖျက်ပြီး ယင်းနေရာ သာသနာ့ဗိမ္မာန် ဆောက်မည့်အပေါ်ကျနော် မိတ်ဆွေ Dameio Ekoto က
မ ဟ န ဆရာတော်တွေ ရဲ့သဘောထားမေးမြန်းထားမူ့အပေါ်
မ ဟ န ဆရာတော်ကြီးများ မအား၍(သန္ဒိသုခ လချုပ်ဝင်ငွေ ခွဲတမ်း အဲ့ ရှင်းတမ်း လုပ်နေလို့) ၄၈ ပါးမြောက်(ကိုယ့်ဘာသူ ပေးထားတာ)
‪#‎ဝါဇီဆြာထှော်‬ မှာ့ ကြားဝင်ဖင်ကျိမ်း အဲ့ဖြေရှင်းပေးသည်)##
စ သာ ပါ ဘုရား
စ သာ ပါ စ သာ ပါ
This entry was posted on November 22, 2014 at 12:46 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.